Zucchini mabhoti Art sens - mazano eimba nebindu
21.09.2015 Yakatumirwa na: Art Sense
Kukurumidza, nyore, kunonaka!, Pfungwa Pamba, Recipes
Chidimbu chiri nyore chekuti yakarongedzwa zucchini chakaumbwa senge mabhoti
Pane akasiyana sarudzo dzeakarongedzwa zucchini, asi pano isu tichaisa iwe nekukurumidza recipe ine zvakawanda zvakanaka uye zvakaringana kubatanidza flavour.
200 ml kirimu yakasviba
munyu, Garlic poda, yakaoma dill (matipi)
Svina zucchini nehupuni uye gadzira mupani yakazodzwa. Pwanya cheki mune yakadzika ndiro uye sanganisa nemazai uye kirimu. Wedzera mapini maviri emunyu, Garlic poda uye yakaoma dill. Sakanidza uye zadza zucchini nekuparadzira musanganiswa saizvozvo. Wedzera mvura pani kuvhara pasi. Bika pa200 madhigiri mune preheated oveni pamusoro nepakati-yakakwirira grill pasina kufukidza ne foil kusvikira musanganiswa wakatsvuka. Mushure mekunge vatonhorera, shanda sehombodo nechero diki rekonzo rakatemwa ne mbatata peel. Sakanidza neino mazino kana hafu ye grill yematanda sezvakaratidzwa. Isa chidimbu chetatu cheturu mureza pamusoro.
Kana iwe uchida kushandisa iyo yakasara kana uchivezwa zucchini, iwe unogona kugadzira sosi uye yakarongedzwa tomate sey yekuwedzera. Dhizaina nehupuni ye7-8 madiki madomasi. Fry the zukini nebhotoro shoma kusvika dzvuku. Dururira kunze matomatisi uye musanganise. Mwaka nemunyu, pepper, basil yakaoma uye oregano. Hwiririra uye uise panzvimbo pechitofu kusvika paukobvu.
Isa matomatisi mune pani yakazodzwa uye uzadza nemusanganiswa wechizi yakapwanywa, wakakanyiwa ham uye mazai. Shandisa imwe yekumhanyisa kusanganisa kana uchida. Bika mune 200 degree oven.
Iwe unogona kushandira zucchini bhoti chete ne nyanya sosi uye matomatisi zvakasiyana kana kuwedzera imwe izere nyanya uye spoonful yemunyu kirimu kurongedza. Kunaka kwekudya!
nekukurumidza chirairo, tomato munyu, zucchini zano, nyore nzira, chikepe, mabhoti, zucchini mabhoti, zucchini recipe, kirimu yakasviba, zukini, zukini nemadomasi sosi, zukini ne kirimu, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Yepakutanga uye inonaka pitsa
Pizza iri nyore uye inokurumidza kugadzirira chikafu chinogona kushumirwa uye mac ...
Kurumidza, nyore uye kunonaka kwekudya kwemangwanani ne ham nezai
Iyi nzira iri nyore yekugadzirira inonaka yakapetwa kaviri ne ham, chizi nezai. Wa ...
Inokurumidza, yakapusa, inonaka ham uye cheki buns
Dzimwe nguva tinoda kuunza kushamisika
Iyo chaiyo hwema hwezvigadzirwa zvehove, iyo nzira iyo inochengetwa uye yakagadzirirwa ...
Yakacheneswa Garlic zucchini Patison ne maorivhi uye kirimu
Iyi yekubheka yeiyo yakarongedzwa zucchini nemiorivhi, kirimu, chizi, kanyanisi chekeji uye garlic. Patis ...
Kebab ine eggplants
Zvigadzirwa zvinodiwa: 6 pc. eggplants 2 pcs. tomato 500 gr minced 1 musoro onion 5 scallop
Isu tinokupa iwe wakanaka uye wepakutanga zano rekushongedza ne zucchini roses. Ivo vakagadzirwa mu ...
Roast huku pane munyu
Iyi nzira iri nyore, ine hutano uye ine hupfumi inongoda pie imwe chete ...